Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | The President and the State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar have conveyed their messages of condolences to the President and the Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
The President and the State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar have conveyed their messages of condolences to the President and the Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
The President and the State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar have conveyed their messages of condolences to the President and the Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on the tragic loss of hundreds of innocent lives and injuring many others due to the terrorist coordinated bombings at various places in Sri Lanka on 21 April 2019. Myanmar condemned the barbaric acts of terrorism and reaffirmed its commitment to combat terrorism in all its forms and manifestations.
Dated, 25 April 201
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ နေရာအချို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက် ဗုံးဖောက်ခွဲမှုများကြောင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ရာပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရပြီး လူအများအပြား ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ကြောင်း ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်များကြောင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သီရိလင်္ကာ ဒီမိုကရက်တစ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ သမ္မတနှင့် ဝန်ကြီးချုပ်တို့ထံသို့ ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာများကို အသီးသီးပေးပို့ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအပေါ် ရှုတ်ချလျက် အကြမ်းဖက်မှုများအားလုံးကို ဆန့်ကျင်သည့် ၎င်း၏ ရပ်တည်ချက်ကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၅ ရ